Ny Semalt dia manolotra fomba 3 maimaimpoana maimaimpoana izay tokony ho fantatrareo
Ny fanasitranana tranokala, fantatra amin'ny anarana hoe fambolena tranonkala sy fanangonam-baovao, dia fampiharana ny famoahana vaovao avy amin'ny tambajotra. Ny rindrambaiko rindrambaiko dia miditra amin'ny Internet miaraka amin'ny Protocol Hypertext Transfer, na amin'ny alalan'ny tranonkala hafa. Ny vaovao manokana dia angonina sy kopia. Voatahiry ao amin'ny tahiry fototra izy io na alaina ao anaty rakitra sarotra. Ny fomba tsotra indrindra hahazoana angona avy amin'ny tranonkala iray dia ny fandefasana izany amin'ny fomba maro, fa afaka mampiasa rindrambaiko maimaim-poana koa ianao mba hahazoana ny asa vita. Raha miparitaka amin'ny tranokala na tranokala an'arivony ny votoaty, dia tokony hampiasa entana ianao - pr backlinks. io sy Kimono Labs mba hahazoana sy handamina ny angon-drakitra araka ny zavatra takinao. Raha toa ka mahafeno ny fepetra ambaranao sy ny fomba amam-panao ianao, dia azonao atao ny mampihatra ny iray amin'ireo fomba ireo amin'ny tetikasanao.
Fiatombohan'ny # 1: DIY:
Maro ny teknolojia manala baraka mivantana amin'ny aterineto. Ao amin'ny fomba fanao DIY, dia manakarama ekipa mpandrindra sy mpandrindra programa mba hahazoana ny asa vita. Tsy vitan'ny hoe manangona angon-drakitra ho anao izy ireo, fa koa hanamboatra rakitra. Ity fomba ity dia mety ho an'ny orinasa sy orinasa malaza. Ny fomba fandraiketana DIY dia mety tsy mifanentana amin'ny mpikatroka sy ny fanombohana noho ny vidiny avo lenta. Raha ampiasaina amin'ny teknolojia fanasivanana tranonkala ny mpampiasa anao na ireo mpamorona anao, dia mety ho sarotra aminao kokoa noho ny vidiny mahazatra. Na izany aza, ny fomba amam-panao DIY dia miantoka ny fampiroboroboana ny angona kalitao.
Fanombohana # 2: fitaovana sy serivisy amin'ny tranokala:
Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa tolotra sy fitaovana fitadiavana amin'ny tranonkala hahafahana manao ny asany. Octoparse, Kimono, Import. io, sy ireo fitaovana hafa mitovy amin'izany dia ampiharina amin'ny kely sy lehibe. Ny orinasa sy ny webmasters dia mamoaka angon-drakitra any amin'ny tranonkala amin'ny fomba maro, saingy tsy azo atao izany raha toa ka manana fandaharana goavana sy famolavolana fahaiza-manao izy ireo. Web Scraper, Chrome extension, dia ampiasaina betsaka hananganana sitemaps ary hamaritana singa samihafa amin'ny tranonkala iray. Indray mandeha, ny angon-drakitra dia nalefa ho JSON na CSV rakitra. Afaka manangana rindrambaiko web ianao na mampiasa fitaovana efa misy. Ataovy azo antoka fa ny fandaharana ampiasainao dia tsy hoe fanasivanana fotsiny ny tranokalanao, fa koa ny crawls ny pejy Internet anao. Ny orinasa tahaka ny Amazon AWS sy Google dia manome fitaovana hikapoka , serivisy, ary ny angona ho an'ny daholobe maimaim-poana.
Tovana # 3: Data-as-a-Service (DaaS):
Ao anatin'ny toe-java-misy ny fampihenana ny angona , ny data-as-a-service dia teknika iray ahafahan'ny mpanjifa manangana tahirin-databary manokana. Ny ankamaroan'ny fikambanana dia manangona tahirin-tsakafo ao amin'ny tahirin-tsoratra tsy miankina. Ny tombony amin'ity fomba fiasa ity ho an'ny mpandraharaha sy ny fanadihadiana momba ny angona dia ny fampidirana azy ireo amin'ny teknolojia vaovao sy tanteraka; Manampy amin'ny fitarihana fitarihana misimisy kokoa koa izany. Izy ireo dia afaka misafidy mpangalatra azo antoka, mahita ireo tantara malaza, ary mijery ny angon-drakitra mba hizara azy tsy misy olana.
Ny rindrambaiko maimaim-poana
1. Uipath - fitaovana tena tsara ho an'ny mpandrindra ny programmers ary afaka manaloka ireo fanamby iraisan'ireo angona angona angon-drakitra, toy ny sora-bavahadin'ny pejy, ny fandrakofana ny flash, ary ny famafàna ireo rakitra PDF.
2. Import. io - Ity fitaovana ity dia mahafantatra tsara indrindra ny mpampiasa azy ary mampiakatra ny angon-drakitrao ao anatin'ny fotoana fohy. Azonao atao ny mandray ny vokatra ao amin'ny CSV sy Excel.
3. Kimono Labs - noforonina ho an'ny tranonkalan'ny faniriana anao ny API, ary azo vakina amin'ny fampahalalam-baovao sy ny tsena ny vaovao.